MACLUUMAADKA IYO EEYAHA EEYAHA EE CAROLINA - EEYAHA
Macluumaadka iyo eeyaha eeyaha ee Carolina
macluumaad iyo Sawirro
Cali the Dog Carolina (Mareykan Dingo) oo jira 7 bilood
Dingo Mareykan ah
Carolina Dog waxay aad ugu egtahay muuqaalka Dingo yar. Astaamaha lagu garto noocyadan ayaa ah kuwa qiimo u lahaa ku noolaanshaheeda daadadka iyo keymaha Koonfurta. Carolina Dog waxay leedahay dherer dhexdhexaad ah oo toosan dhabarka, laabta sifiican u horumarsan iyo caloosha oo si fiican loo duubay, taasoo siineysa waxoogaa u eg egyada muuqaalka. Waxay leedahay qoor dheer, madax u eg cirif leh daamanno awood badan, indho madow oo u eg almoon leh muuqaal jilicsan, caqli badan, haddana feejignaan leh, iyo dhago aad u sareysa oo kacsan oo aad u dhaqdhaqaaq badan. Eyga loo yaqaan 'Carolina Dog' waa mid aad u muruqsan isla markaana awood leh cabirkiisa, oo muujinaya dhaqdhaqaaq xoog badan, bilaash ah oo qunyar socod ah oo wata waddo badan waana mid aad u jilicsan oo awood u leh inuu isla markiiba soo jeesto. Waxaa lagu kala soocayaa nooca 'dabada-kalluunka' oo ah dabada, oo lagu qaado meelo kala duwan iyadoo loo eegayo niyadda eyga, laakiin marna ha dabacsanayn ama dabacsanayn. Maqaarku waa adag yahay, jaakaduna waa gaaban tahay laakiin waa qaro weyn tahay oo jaakad cufan leh xilliyada la joogo, waxaa jira waxyaabo badan oo timo dheeri ah oo qoorta ah, qallaji doona iyo dhabarka oo laga yaabo inay taagnaadaan marka eygu kacsan yahay. Midabka Carolina Dog waa mid gaar ah, badiyaa sinjibiil casaan qoto dheer leh oo leh calaamado cirro leh oo garbaha iyo dhinaca xuubka ah, iyo hooska xarkaha oo hoose, hunguriga iyo laabta. Hoosyada fudud ee casaanka iyo kareemku maaha wax aan caadi ahayn. Hooska madow oo ka hooseeya dhabarka, dhexda iyo dabo ayaa la oggol yahay.
Kuwa soo socdaa waa kala duwanaanta midabka iftiinka ilaa mugdiga. Midab gaar ah ayaa ku qoran:
Cadaan leh dhibco
Tan, beige, ciid cidla ah, jaalle
Liin dhanaan, sinjibiil cas
Midabka la doorbido waa sinjibiil casaan qoto dheer leh oo leh calaamado cirro leh oo garbaha saaran iyo xuubka. Kala duwanaanta midabka, qiimeynta laga soo bilaabo cawska midabkeedu sarreeyo ilaa midabka huruudda ah ama midabkeedu sidoo kale waa la aqbali karaa, laakiin waligood ma cadda. Eyga loo yaqaan 'Carolina Dog' waa inuu u ekaadaa xayawaan dabiici ah, oo awood u leh inuu ku noolaado duurka, oo adag, xoog badan oo karti leh. Lama goynin.
Eyga Carolina waa eey pariah ah. ('Eyga Pariah' waa magac guud ee Hindiya loogu talagalay eeyaha dib loo soo celiyay ee ku soo qulqulaya tuulo kasta, oo aysan jirin cid gaar ah, laakiin waxay diyaar u yihiin inay la socdaan qof kasta oo socdaal ugaarsi ah.) Carolina Dog waa mid ka mid ah kuwa aad u in yar oo ka mid ah noocyada maanta jira oo runtii ah eey hordhac ah, oo ka dhashay xulashada dabiiciga ah ee ku noolaanshaha dabeecadda, oo aan ahayn taranka xulashada. Tijaabooyinka duurjoogta wali waa la yaqaan, markaa tani ma aha gebi ahaanba geedka la dhaqdo. Eygan oo u noolaa sidii xayawaan nool oo bilaash ah oo ku nool buuraleyda, savannahs, iyo keymaha South Carolina iyo Georgia kumanaan sano ayaa sidoo kale la caddeeyey inuu si aad ah ula qabsan karo isla markaana u rogi karo guri-joog, iyo xayawaan aad u fiican. Eeyo badan ayaa lagu yaqaan inay xishood badan yihiin dadka ayna aad u necbaan wax-qabad badan mooyaane bulsho isagoo aad u da 'yar. Isdhexgalka saxda ah, waxaa loo cadeeyay inay yihiin eeyo wehel u ah. Astaamo badan oo ka mid ah eeyga dabiiciga ah ee ugu badan ee loo yaqaan 'Carolina Dog' ayaa gacan ka geysta awoodiisa inuu si wanaagsan ula qabsado inuu noqdo xayawaan jecel. Eyga Carolina wuxuu jecel yahay oo wuxuu u baahan yahay inuu ka mid noqdo xirmo, sidaas darteedna wuxuu si fiican ugu dhex milmaa nidaamka qoyska. Isagu waa nin jilicsan, eey bulsheed, oo sifiican ula xidhiidha carruurta, kuna raaxeysta ciyaarta iyo waxqabadyada iyaga. Eyga Carolina waa dabiiciyan dabiiciyan waana sahlan tahay jabka guriga . Isagu waa mid caqli badan oo jawaaba oo si fudud wax u barta oo aan wax dumin. Dabeecad dagaal ma ahan laakiin waa mid si horumarsan u horumarsan dareen ugaarsi , Eyga Carolina wuxuu la macaamili doonaa xayawaanka kale haddii loo baro iyaga oo da 'yar. Sida noocyada kale eeyaha pariah, Carolina Dog waa mid madaxbannaan. Haddii aad u haysatid mid ka mid ah eeyadan sidii xayawaan gurijoog ah, mid ayaa loo baahan yahay gaaro heerka hogaamiyaha xirmada . Waa dareen dabiici ah eey ey leedahay ku dalbo xirmadooda . Markii aan dadku waxay la nool yihiin eeyaha , Waxaan noqonay xirmadooda. Xirmada oo dhan waxay lashaqeysaa hal hogaamiye. Khadadka si cad ayaa loo qeexay xeerarna waa la dejiyay. Sababtoo ah eeygu wuxuu u gudbiyaa xanaaqiisa ciil iyo aakhirka qaniinyada, aadanaha kale oo dhan WAA INAY ka sarreeyaan nidaamka eyga. Bini'aadamku waa inuu noqdaa kuwa go'aaminaya, eeyaha maahan. Taasi waa sida kaliya ee adiga xiriirka iyadoo eygaagu noqon karo guul dhammaystiran. Wuu shakisan yahay waxaana laga yaabaa inuu xoogaa ka xishoodo shisheeyaha iyo hareeraha ama duruufaha aan la aqoon. Kani ma aha eey wax walba oo saaxiibtinimo leh oo qof walba saaxiib la ah, laakiin wuxuu u heellan yahay 'baakad' u gaar ah. Waxay ku raaxaystaan ​​ugaarsiga ugaadh yar, hawsha ay ku qabtaan nimco iyo deg deg. Carolina Dog waxay ku dhowdahay inay u dhaafto cabir ka weyn Dingo . Sida oo kale Dingos iyo pariahs hortooda, waxay leeyihiin dareen xoolo dhaqasho. Carolina Dogs waxay leeyihiin u janjeera inay ku ooyaan dhawaqyada qaarkood.
Dhererka: 17 - 24inches (45 - 61 cm)
Miisaanka: 30 - 44 rodol (15 - 20 kg)
Carolina Dog laguma talinayo nolosha guriga. Waxay sida ugu fiican u qabtaan meel fara badan oo ku wareegsan. Wali si buuxda looma aqoonin guriga. Waxay ku noolaan karaan banaanka haddii qabowgu uusan aad u sarreyn. Waxay si fiican ula qabsadaan cimilada kulul, qoraxdu.
Carolina Dog waa in loo qaataa a maalin kasta, socod dheer . Intii aad socotey aad ayey muhiim u tahay in eeyga laga dhigo ciribta cirifka qofka ama gadaashiisa inta uu xadhiga kujiro, sida maskaxda eeyga maskaxdiisa, hogaamiyaha ayaa hogaaminaya wadada.
Qiyaastii 12-14 sano.
Qiyaastii 3 ilaa 6 eey
Koodhka Carolina Dog way fududahay in la xannaaneeyo oo si ficil ah ayuu isu daryeelaa naftiisa. Waxay ka faa'iideysan doontaa cadayasho marmar ah. Maydho oo keliya markii loo baahdo.
heeler buluug muqisho isku darka feeryahanka
Carolina Dogs waxay ahaayeen eeyaha Hindida waxayna ahaayeen eeygii ugu horreeyay ee laga yaqaan Ameerika. Eyga loo yaqaan 'Carolina Dog' wuxuu ka soo baxaa American Deep South waxaana loo maleynayaa inuu yahay farac toos ah oo ka soo jeeda eyda qadiimiga ah ee la socota Aasiyaanka ee maraya buundada dhulka ee Bering Strait 8,000 sano ka hor. Tiro ka mid ah noocyada noocaas ah ayaa ka jira Mareykanka. Carolina Dog waxaa helay oo magacaabay Dr. I. Lehr Brisbin, Jr, oo ah borofisar cilmiga bayoolajiga ka ah Jaamacadda Georgia, Waaxda Tamarta ee Mareykanka ee webiga Savannah ee ku taal South Carolina. Tani waa aag fog oo dadweynaha laga reebay, eeyaha duurjoogta ah ee halkaa ku noolaa qarniyo badan ayaa helay fursad yar oo ay kula soo baxaan eyda guryaha ku nool. Brisbin wuxuu xusay in eeyadan ay ahaayeen kuwo isku muuqaal eg Dingo . Seynisyahanno kale waxay arkeen in qaab dhismeedka lafaha ee Carolina uu aad ugu egyahay hadhaagii lafihii eyda neolithic ee ka yimid meelihii lagu aasayay Dhaladka Mareykanka ee kumanaan sano jiray. Khubarada cilmiga bey'ada ee Koonfurta, oo uu kujiro Dr. I. Lehr Brisbin, Jr., waxay raadinayaan muunado saafi ah oo wali kujira qulqulatooyinka duurjoogta iyo dhirta dooxada ee wabiga Savannah. Pups-ka ayaa mararka qaarkood lala meeleeyaa qoysaska la xushay si loo koriyo loona tababaro sida wehel iyo ugaadhsade ciyaarta yar. Brisbin wuxuu rajaynayaa in baadhitaan lagu sameeyo Eyga Carolina, eyda maanta si fiican loo fahmi karo. Qaar badan oo eeyahaas ka mid ah waxaa jeclaaday Hindida waxaana loo adeegsaday howlo kala duwan sida dhaqashada xoolaha. Eyga loo yaqaan 'Kentucky Shell Heap Dog' iyo Eyga Basketmaker-ka ayaa tusaale u ah baaluqyadii hore ee qaaradda Waqooyiga Ameerika. Down South, Carolina Dog waxaa si kalgacal loogu magacaabay 'Old Yaller' midabkiisa huruud dartiis.
AMA = Ururka Taranka Caadiga ah ee Mareykanka
CDA = Carolina Dog Association
'Sawirka waa ilmahayga yar ee loo yaqaan' Carolina Dog ', oo 11 jir ah, Sophia. Waxay ka soo duushay beer ku taal South Carolina waxayna tagtay San Diego, ka dib waan soo qaaday oo waxaan u kaxeeyay Gilbert, Arizona (aad bay u kulushahay inay u duusho Phoenix xayawaanka rabaayadda ah), oo ay hadda ku nooshahay. ',
Cali the Dog Carolina (Mareykan Dingo) oo jira 7 bilood jir— 'Cali waa badbaadin laga helay hoy lagu dilo Arkansas. Kubaddan yar ee tamarta iyo waxtarka leh waxay dhalatay Maalinta Jacaylka. Waxay miisaankeedu ahaa 4lbs markii aan ka helnay 4 bilood. Waxay miisaankeedu ahaa 25lbs markay ahayd 7 bilood. Waxay ku nooshahay Upstate New York gurigeeda weligeed iyada iyo labadeeda waalid ee hanka leh. Iyadu waa eey aad u gaar ah, karti badan, eey wejiyo badan leh oo maskaxdeeda leh. Waxay wax uun ka qaban doontaa wax uun daaweyn ah 7 bilood ka horna way garaneysaa sida loo fariisto, loo joogo, loo bixiyo bawdada, shanta sare ee 'labada lugood' oo jiifa, soo doonasho iyo soo noqosho sanduuq tababaran , wuxuu ku socdaa garabkeyga oo waxaan jeclahay raacista baabuurta wax ka badan. Aad ayey daacad ugu tahay qoyska oo marar dhif ah ayey dhinacayga ka tagtaa. Cali wuxuu la jaanqaadaa eeyaha kale iyo dadka, inkasta oo xiisaha shisheeyaha ay marka hore si dhakhso leh u diiriso. Illaa iyo hadda Cali wuxuu ku noolaa qaab nololeed soo jiidasho leh maadaama ay ku tagtay safar xero 7 maalmood ah oo teendho ah, dhowr webi oo ay ka soo martayna ay soo martay, iyada oo ugu yaraan 12 buurood socotey isla markaana saacaddu ay ahayd 3000 mayl iyadoo madaxeeda ka baxsan daaqadda rakaabka.
Cali the Carolina Dog (American Dingo) oo 7 bilood jir ah oo jecel kubadeeda weyn ee cas.
Lahaanshaha sawirka Susan Anthony, California-Carolina Dogs
Sage Carolina Dog at 1 1/2 sano jir
Sage Carolina Dog sida eey
Marlowe eeyga eyga Carolina ee 6 toddobaad jir ah— 'U fiirso jaakada madow iyo dhagaha eeyaha.'
Marlowe eeyga eey ee Carolina 3 bilood jir ah— 'U fiirso hannaanka dheguhu u noqdaan kuwo toosan. Dhagta midig ee Marlowe way istaagi doontaa, ka dibna way foorari doontaa, ka dibna way istaagi doontaa mar kale muddo bilo ah illaa ay aakhirka go'aansato inay sii joogto. Ogsoonow in dharkiisu aad uga fudud yihiin-laakiin markan, dabadiisa weli wey madoobaatay (midabka isbeddelka ayaa ka shaqeeyay jidhkiisa hoos-aad u qabow.) '
Marlowe the Carolina Dog oo si buuxda u koray qiyaastii 1½ sano jir— Dhegaha ayaa si joogto ah u taagan xilligan, oo maradiisa si buuxda ayaa loo fududaaday.
Eeg tusaalooyin dheeraad ah ee Eyga Carolina
Carolina Dog Sawirada 1
labrador sarkaal madow iyo caddaan
adhijirka Jarmalka iyo isku darka akita
shih tzu iyo roomaaniyiinta isku dhafan
bar bar ingiriisiga bulldog Faransiiska
sawir eey ey godob
eey ayaa ku dhasha xarfaha alifbeetada leh sawirro